Tomato "Ilya Muromets": nkọwa na njirimara nke dịgasị iche iche tomato ụtọ - Akwukwo nri - 2020
Tomato "Ilya Muromets": àgwà na nkọwa nke iche iche
Ọ bụ onye ọ bụla maara nke ọma, Ilya Muromets bụ dike Russia. Ọ gaghị ekwe omume ikenye aha ya mkpụrụ osisi tomato na-achaghị mkpụrụ, n'ihi na ihe dịgasị iche iche ga-edekọ aha ya. N'ọnọdụ anyị, egwuregwu ahụ zuru ezu. Ị nwere ohere ịhụ maka onwe gị.
Gụọ isiokwu anyị maka nkọwa zuru ezu nke ụdị dị iche iche. Anyị ga-echebara atụmatụ nke ịmepụta tomato ndị a na àgwà ya isi.
Tomato "Ilya Muromets": nkọwa nke iche iche
Di iche iche nke Tomato "Ilya Muromets" - Russian dịgasị iche iche ma tinye na State Register nke Russian Federation, dị ka a tụrụ aro ka a na-akọ ihe n'ubi na ihe nkiri fim na mpaghara ugbo na ebe ndị mara mma. Onye na - esite na - eme ka ịchọta Search.
Tomato Ilya Muromets n'etiti oge, site na germination ka mbụ mfri eke mfri - 95-108 ụbọchị. Ọmarịcha mkpụrụ osisi salad. Na-enye mkpụrụ dị elu mgbe niile. Na griin haus - 10-11 n'arọ kwa square mita, na-emeghe ala - 6-8 n'arọ. na oru ndi oru ugbo kwesiri.
Ohia dị ike n'ezie, ike, na griin haus ọ ruru 2 mita.
N'aka oghere, tomato na-eto na 80 centimeters. Ụdị ahụ adịghị mma, ọ dị mkpa iji tie ya na nkwado, iji mepụta ya ma jigide ya.
Nkeji akwukwo. Nke a bụ ọnụ ọgụgụ.
Ncha nke mkpụrụ osisi 5 ma ọ bụ isii. Ifuru dị mfe.
Tomato e si na ya pụta bụ ọrụ ebube! Bright, acha odo odo, akpụkpọ ahụ na-egbu maramara. Ejiri ya, kwekọrọ na ya, na-atụgharị site na 250 ruo 350 grams. Mgbe iberibe akụkụ nke ovary, ị nwere ike inweta nnukwu mkpụrụ.
Tomato dị oke, na-enweghị ihe ndị na-eme ka ọ ghara ịdị, ọ dị ole na ole mkpụrụ.
A naghị akpọ mkpụrụ osisi mkpụrụ.
Ire na okpukpo bụ ọmarịcha.
Ime n'ime ihe fọrọ nke nta ka oma na agba.
Ihe na-ekoghi oke n'ime ihe ọṅụṅụ bụ ihe dịkarịa ala 5%, sugar - site na 3.5 ruo 4%.
Tomato dị nnọọ oké ọnụ na mgbe ị na-agagharị, a naghị achọta ya.
Ogologo na transportability dị mma.
Ihe magburu onwe ya na-eme ka Ilya Muromets mara mma maka tomato maka ndị na-azụ ahịa.
Mgbe ahụ i nwere ike ilekwu anya na mkpụrụ nke tomato dị iche iche "Ilya nke Murom":
Usoro nke na-eto eto tomato Ilya Muromets eluigwe na ala. Mana ekwesiri ighota na a ghaghi ime ocha dika o choro. Ịkwa ụra dị njọ.
Umu ahihia ndi na-adighi nma bu ndi na-ewu ewu kwa afo. A na-agbatị tomato n'ime ya tupu mmalite nke frosts, owuwe ihe ubi mbụ ahụ na-eme na njedebe nke June, ọ bụrụ na ụdị dị iche iche na-etolite n'oge na n'etiti ụtụtụ. N'ihi nke a, mkpụrụ osisi ahụ dị okpukpu abụọ karịa ka ọ na-emepụta n'èzí.
N'aka ọhịa, tomato anaghị eru ogo ha, ma a na-achọrọ garter, pasynkovanie na nhazi. Ọ na-ewe oge iji lekọta. Ekwesiri ighota na n'ime ogige nke ubi a na-etowanye agba na tastier karịa greenhouses.
Iji nweta ihe ọkụkụ n'oge mbido, ị nwere ike iji okpokoro ndị a na-eji arụ ọrụ. Ha na-etinye mkpụrụ tomato ahụ n'ubi ma na-ekpuchi ya. Mgbe nchekwa anaghịzi adị mkpa, a na-ewepụ ha tupu oge ọhụrụ ahụ. N'afọ sochirinụ, akwa tomato gị ga-anọ n'ebe ọhụrụ. Enwere ike ịnweta ngwa mkpuchi ọzọ.
Ọdịdị tomato dị iche iche bụ "Ilya Muromets" nwere nnukwu nguzogide ọrịa na-ebute ọrịa. Ọ na-anabata nnukwu ala na ikuku. Isi pesti maka tomato bụ Colorado nduku ebe. Ọ dị ize ndụ maka osisi na-eto eto. Mgbe o yiri ya, fesa tomato na ọgwụ ọ bụla, na-arụ ọrụ dịka ntụziaka maka nkwadebe.
Ekwesiri ighota na tomato bu otutu odo odo, di ka oroma, nwere otutu carotene. A tụgharịrị Carotene n'ime ahụ n'ime vitamin B. ọ na-efu. Nke a bụ àgwà dị oké ọnụ ahịa. Iri mkpụrụ osisi dị ọhụrụ bara ezigbo uru. Egwuregwu Ilya Muromets dị na nke a bụ ihe na-asọpụrụ godend.